dayniile » Gabadh uu dhalay Amiirka Dubay oo tahriibtay
Gabadh uu dhalay Amiirka Dubay oo tahriibtay
Gabadhaan waxaa la yiraahdaa Ladiifa. Waa inan uu dhalay Amiirka ka taliya Dubay ee la yiraahdo Maxamed bin Raashid Aala Maktum.
Waxey ka soo carartay qoyskeeda. Waxey la kulantay cadaab iyo cidhiidhi xagga nolasha ah oo ay ku sameyn jireen qoyska ay ka dhalatay. Waxay xustay in seddex sanno xabsi sir ah lagu hayey. Waardiye culusna la dabadhigay. In aysan dalka ka bixi karin. In aysan baabuur ka xeysan karin iyo in nolasheeduba halis ku jirto.
Waxaa ku gacansiiyey in ay soo baxsato, oo hab tahriib ah ku soo saaray nin Faransiis ah oo sirdoon ah. Ladiifa waa gabadh soddon iyo seddex jira. Aabbaheed wuxuu ka dhalay hooyo Aljeeriyaan ah, waxeyna ka mid tahay soddon ilmood oo aabbaheed Maxamed bin Raashid uu ka kala dhalay lix xaas oo uu guursaday.
Ladiifa haatan waxey ku dhex sugan tahay markab ku sugan Xeebaha Hindiya. Hadda, waxey magangalyo siyaasadeed ka codsatay Dalka Mareykanka, waxaana socda xariir la la sameynayo qareenno ka gacansiiya arrinteeda.
Amiirro iyo boqorro cadaab ku haya gabdhihii ay dhaleen, baa waxey ku fakarayaan in ay maalin caddeey boobaan dalkeenna hooyo!!
Halkaan ka tixraac: www.google.it/amp/www.dailymail.co.uk/news/article-5478493/amp/Runaway-Princess-mystery-ruler-Dubai-daughter-flees-country.html. 09/3/ 2018